किशोरीलाई मन्त्री थापाको लिडरसिप टिप्स |
किशोरीलाई मन्त्री थापाको लिडरसिप टिप्स
प्रकाशित मिति :2019-10-23 11:38:19
ललितपुर । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले किशोरीहरूलाई भावी पुस्ताको नेतृत्वका लागि तयार हुन आग्रह गरेकी छन् ।
सोमबार लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान वर्षलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री थापाले विगतमा राजनिति गर्ने महिलाहरुले गरेको मेहनत र बगाएको पसिनाका कारण आज सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागीता सम्भव भएको बताइन् ।
उनले किशोरीहरूले आजका दिनमा समस्यामा परेका व्यक्तीहरुलाई सहयोग गर्ने र सामाजिक समस्या निराकरणका लागि भूमिका निर्वाह गरेर भोलीको नेतृत्वका लागि तयार हुन प्रोत्साहित गरिन् ।
मन्त्री थापाले भनिन्, “ठाउँठाउँमा गएर बोल्नुहुन्छ, समाजका कुराहरु बुझ्नुहुन्छ त्यसले तपाइलाई समाजमा स्थापित हुन सहज हुन्छ ।” गाउँस्तरका लैगिक समस्या समाधानका लागि किशोरीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले त्यसमा सघाउन अनुरोध गरिन् । “स्थानीय सरकारले तपाइहरूका कुरा सुन्छ, सन्नुपर्छ । तपाइहरुले स्थानीय सरकारलाई आफ्ना कुराहरु राख्नुस, काम गर्न सक्ने बनाउनुस ।”
किशोरी सञ्जालकी अध्यक्ष १७ वर्षकी मेनुका थापाले छोरीहरुले अहिले पनि घरबाट बाहिर निस्केर काम गर्न सक्ने वातावरण नभएको बताइन् ।
उनले सामाजिक कामका लागि घरबाहिर निस्कने कोशिस गरेपनि सामाजिक वातावरण सहज नहुदाँ समस्या रहेको बताइन् । उनले भनिन्, “छोरीहरूलाई घरको काममा मात्र सिमित होस् भन्ने धारणा अझै पनि उस्तै छ । बाहिर गयो भने कहाँ गइस रु किन गइस रु के का लागि गइस रु भनेर सोध्छन ।”
बर्दिया जिल्लाबाट महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना सुझावहरू सुनाउन आएकी १६ वर्षकी दिक्षा गिरीले शिक्षित व्यक्तीहरुबाटै लैङ्िगक विभेद भोग्नुपरेको बताइन् ।
उनले घरमै पनि महिनावारी भएको बेलामा बुवाआमाले खाना पकाउन जाउँ भनेर भने पनि पूजा गर्न जाउँ भनेर चाँही नभनेकोमा गुनासो गरिन् ।
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २०७६ लाई लैङ्िगक हिंसा विरुद्धको अभियान बर्षका रुपमा मनाउन लागेको हो । जसका लागि मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तीहरुसंग नियमित छलफल गरिरहेको छ ।
नारी निकुञ्जले राष्ट्रिय उत्सव र अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस संगै मनाउने
मर्यादित महिनावारी कि छाउपडी !
नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा वृद्धि
महिला महासंघले सरकारसँग ‘टेबल टक’ गर्न सक्छ ?
‘महिनावारीका कुरा, मर्यादाले हुन्छ पूरा’ वा ‘मिन्स्रुअल् टक, डिग्निटी फस्ट’ नारामार्फत संसारलाई नै आफ्नो पहिचान
–महिला खबर– ललितपुर । अंग्रेजी वर्ष सन् २०१९ मा नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका
घर निकाला भएकी मैनाको आफन्त र उपचार अभावमा ज्यान जोखिममा
-आशिष प्रताप मल्ल- बाजुरा । सन्तान नभएको भन्दै श्रीमान्ले दोस्रो बिहे गरेपछि घर निकाला गरिएकी मैना
सामूहिक बलात्कार आरोपमा दुईजना पक्राउ
महिलालाई जनकपुरधाम उमनपा–४ स्थित विश्वकर्मा चोकमा फागुन ४ गते राति १० बजे सामूहिक बलात्कार गरेको
द्वन्द्व पीडित महिलाको राष्ट्रिय सञ्जाल गठन
–महिला खबर– ललितपुर । सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित तथा प्रभावित महिलाहरूको भेलाले द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय
अश्लील शब्द र आमाको अर्ती
डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सम्हालिन् पदभार
शहरिया नारीलाई प्रश्नः तिमी र म कसरी बराबर ?
लैङ्गिक समानता र महिलावाद
स्वस्थानीको पाना च्यात्ने कि छाउगोठ भत्काउने ?
प्रदेशकै नमूना न्यायिक समिति बनाउने धोको
महिलालाई अलमल्याएर अर्धबेरोजगार बनाउन बन्द गर्नुपर्छ– मन्त्री गुरुङ